About Us - I-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd.
I-Forsetra Roof Tile Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2017, igxile ekwakhiweni kwamatshe enziwe ngamatshe wensimbi yophahla lwensimbi, imishayo ye-asphalt kanye ne-PVC / ALUMINUM gutter yemvula. Siphinde sivelise okuphezulu-zinc-kokuqukethwe kwensimbi ye-truss yezindlu zesakhiwo sefreyimu enesisindo esincane. Ngalo lonke lolu chungechunge lwezinto zokwakha izindlu ezifanele, sisebenza ukunikela ngamakhasimende ethu ngezinsizakalo zokuthenga eyodwa.
Sinezintambo ezimbili zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme zamathayili ophahla lwamatshe anemibala ehlukene zombala owodwa nemibala ehlanganisiwe, enesethi ephelele yezesekeli, njengama-ridge cap, ugqoko wesigodi, ibhagethi nephepha eliyisicaba nokunye. Futhi, sinayo yonke imiklamo eyisithupha eyaziwayo iphrofayili yophahla lophahla kanye nemibala ehlukene amakhasimende ayoyikhetha, ukuze ahlangabezane nazo zonke izidingo zamakhasimende. Okwamanje, futhi semukela ukucutshungulwa kwezingxenye ezenziwe amakhasimende zalawo makhasimende afuna ukubukeka okungafani kophahla noma igeji yomkhiqizo ehlukile.
I-Forsetra Roof Tile Co.Ltd ayigcini nje ngokukhiqiza amathayela wensimbi, kodwa futhi ikhiqiza umkhiqizo wesistimu yemvula ye-PVC / ALUMINUM, ukuze ihlinzeke amakhasimende ngokuthengwa kwempahla eyodwa. I-Asphalt shingle yethu njengomunye umkhiqizo esiwukhiqizayo, ukwengeza inketho eyodwa yamakhasimende ikakhulukazi aqhamuka emazweni aseNingizimu mpumalanga ye-Asia kanye naseNingizimu Melika, lapho imibala ye-asphalt enemibala ethandwa kakhulu ukuyisebenzisa.
I-FORSETRA ikholelwa ukuthi ukwakha indlu eqinile futhi enhle yekhasimende kubaluleke kakhulu njengokwakha idumela lomkhiqizo osezingeni eliphezulu kithi. Ngakho-ke, sakha okungcono kunayo yonke inhlobo eyodwa yezinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe kulo lonke elaseChina futhi sizimisele ukukhokha inani eliphakeme nokunakwa ngalo ukuze siqiniseke ukuthi umkhiqizo wethu wanelisa izidingo zamakhasimende ethu ngekhwalithi. Sihlose ukuhlinzeka ngabakhi bezakhiwo, izinkampani zokwakha, abathengisi bezindlu kanye nabanini bamakhaya ngamathayili ophahla aphakeme kakhulu athokozisayo amehlo futhi aklanyelwe ukumelana nezinto.